Tsiroanomandidy : Fanafihan-dahalo, olona efatra maty – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → juillet → 22 → Tsiroanomandidy : Fanafihan-dahalo, olona efatra maty
Tsiroanomandidy : Fanafihan-dahalo, olona efatra maty
Redaction Midi Madagasikara 22 juillet 2019 3 Comments
Telo no maty tamin’ireo fokonolona, iray kosa ny tany amin’ireo dahalo. Omby 141 kosa no lasa. Ireo no vokatry ny fanafihan-dahalo nitranga tao Antshalava, distrika Tsiroanomandidy, ny faran’ny herinandro lasa teo. Namaivay izay tsy izy ny fifandonana teo amin’ny dahalo izay tonga nanafika tao amin’ny tananan’Andisipake, fokontany Beambiaty, sy ireo fokonolona izay tsy nanaiky lembenana. Araka ny fampitam-baovao azo dia dahalo nahatratra teo amin’ny telopolo lahy teo no nanafika io tanana io. Basim-borona 29 no teny am-pelan-tanan’izy ireo niaraka tamon’ny basy kalach iray. Nirefodrefotra ny basy. Maty tsy tra-drano vokatr’izay ny tompon’omby sy ny olona roa hafa. Nisy telo kosa naratra. Tetsy an-danin’izay kosa anefa dia nisy iray tamin’ireo dahalo no matin’ireo fokonolona sy ny zazamainty. Na izany aza anefa dia tsy nahery tosika ny fanafihan’ireo malaso ireo fokonolona ka lasa ihany ny omby niisa 141. Taorian’ny fitsoahan’ireo olon-dratsy dia nampandrenesina ny zandary izay avy hatrany dia nandeay andraikitra, nanao sahavao sy sakana tamin’ireo kizo tany an-toerana. Nisy sasany tamin’izy ireo kosa, zandary sy fokonolona ary nampian’ireo miaramila avy amin’ny BIA, no avy hatrany dia nanao ny fanarahan-dia. Vokany, tsy ela dia nifankatratra ireo mpanara-dia sy ireo dahalo. Nilavo lefona avy hatrany moa ireto farany rehefa nahita ireto mpitandro filaminana ary azo teny am-pelan-tananan’izy ireo ny omby 134 isa. Fantatra kosa fa ireo omby fito ambiny dia maty sy novonoin’ireto malaso ireto teny am-pitsoahana. Na dia azo aza moa ny omby dia mbola manohy ny fikarohana ireo olon-dratsy ireo mpitandro filaminana.
Baleda charles 22 juillet 2019 at 15 h 03 min · Edit
Mbola vidina koa anie ireo puce ireo ary OBLIGATOIRE…KAnefa raha apetaka eo amin’ny sofina dia mora ESORINA…ENY na any amin’ny vantana aza satria tsy maintsy EFA MISY MANAMPAHAIZANA ao anaty nY RAFITRA. FOMBA NENTINA HAKANA VOLA AMIN’NY MPIOMPY ,(toy ilay PERMIS BIOMETRI Q UE fôsika tamin’ny SOLONANDR….)
Rodrick 22 juillet 2019 at 14 h 06 min · Edit
puce @ sofin’omby no eritreretin’ny mpitondra antsika fa zavadehibe hamongorana an’io fomba ratsy io
Baleda charles 22 juillet 2019 at 13 h 01 min · Edit
Toa mahazaka omby marobe tahak’izany ireo MALASO dia efa misy ORGANISATIONS MIPETRAKA
,ENTRAINEURS,FORMATEURS,INITIATEURS AU MANIEMENTS DES ARMES A
–Lieux de stocage des bovidés izay tokony efa ho FANTATRY NY MPITANDRO FILAMINANA EFA ELA…Ny mampalahelo dia SADY VERY FANANANA NY VAHOAKA MAMOKATRA NO MATIMATY FOANA ,fa ny sasany MIHAMATAVY ANDRO AMAN’ALINA